पत्रकार देखेपछि भारतीय पक्षले अलपत्र नेपाली पठाउन मानेन « Sajilokhabar
पत्रकार देखेपछि भारतीय पक्षले अलपत्र नेपाली पठाउन मानेन
फायत तस्वीरः काँकरभिट्टा नाका
झापा, ५ जेठ । नेपालमा मिडियाबाजी धेरै भएको भन्दै भारतीय प्रशासनले पानीट्याङ्कीबाट आज पठाउने भनिएका अलपत्र नेपाली तत्काल नपठाउने भएको छ ।
पानीट्याङ्कीमा भएका नेपालीलाई आज बिहान ९ बजेबाट नेपाली आउने भनिएको थियो । तर, समाचारका लागि दर्जनौ पत्रकार काँकरभिट्टाको पुलमा पुगेपछि भारतीय प्रशासनले तत्काल नछाड्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अगुवाईमा पानीट्याङ्कीदेखि सिलिगुडीसम्म अलपत्र एक हजार भन्दा बढी नेपाली ल्याउने तयारी गरेको थियो । जलपाईगुडी जिल्लाका डिस्ट्रिक मजिस्टेड (डिएम) र एसएसबीको जलपाईगडीमा सोमबार भएको बैठकपछि नेपालीलाई तत्काल पठाउन नसकिने जनाकारी आएको हो । उनले नेपालका मिडियामा धेरै प्रचार भएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले सजिलो खबरलाई बताएको छ ।
दुई केन्द्रीय सरकारबीच जो जहाँ छ, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएकाले मूल मार्गबाट पठाउन वा ल्याउन पाईदैन । नेपाल र भारतको स्थानीय प्रशासनबीचको सहमति अनुसार अलपत्र नेपालीलाई मेची पुलको दक्षिण क्षेत्रबाट दश दश जना गरेर ल्याउने तयारी भएको थियो ।
पानीट्याङकीमा लगभग ३ सय, माटीगाडामा ४ सय ३५ जना, नक्शल र शिलिगुडीको प्रधान नगरमा लगभग ३ सय नेपाली क्वारन्टाइनमा बसेका छन् । पानीट्याङकीमा लगभग ५० दिनदेखि नेपाली क्वारेन्टाइनमा छन् ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासन र विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा एक हजार भन्दा बढीलाई खाना र आवासको प्रवन्ध भएको थियो । भारतबाट आउने नोपलीलाई आरटिडी परीक्षण गर्ने, परीक्षण नेगेटिभ देखिएका एक नम्बर प्रदेशका नागरिकलाई भने सम्बन्धित जिल्लासम्म छाड्ने बसकोसमेत प्रवन्ध भएको थियो । तर, नेपाल तर्फ सञ्चारमाध्यममा धेरै प्रचार भएको भन्दै भारतीय पक्षले छाड्न नसकिने जनाएको स्रोतले बतायो ।
प्रदेश १ का आरटिडी पोजेटिभ देखिएका र अन्य प्रदेशका नागरिकलाई होल्डिङ एरियामा राख्ने सबै तयारी भएको थियो । तर, भारतीय प्रशासनले पठाउन नमाने पछि सीमामा अलपत्र १ हजार भन्दा बढी नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न तत्काल नपाउने भएका हुन् ।
शरणको अगमनले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकिएको हो ?
काठमाडौँ, १४ जेठ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार
अमेरिकामा नेपालीको कोरोना जिन्दगी
प्रविधिको नयाँ प्रयोग गरेर भर्चुअल कविगोष्ठीमा सहभागी भइयो । कवि केशव आचार्यको सम्पर्कबाट नेपाल स्रष्टा
भद्रपुरमा कोरोना अस्पतालः किन हुँदैछ विवाद ?
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि प्रदेश सरकारले झापामा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल र पिसिआर विधिबाट